बालेनले घुमाए लौरो, साउन १ देखि नँया येस्तो नियम नमाने सिदै कार'वाही !! - Compaq News
बालेनले घुमाए लौरो, साउन १ देखि नँया येस्तो नियम नमाने सिदै कार’वाही !!
काठमाडौं महानगरपालिकाले साउन १ देखि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन आग्रह गरेको छ। महानगरको वातावरण तथा कृषि विभागले बिहीबार सूचना निकालेर साउन १ देखि फोहोरको पृथकीकरण गर्न महानगरवासीलाई आग्रह गरेको हो।
साउनदेखि अब कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग अलग दिन उठाउने जनाएको छ। प्रचलित कानूनअनुसार कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने जिम्मेवारी फोहोर उत्पादनकर्ताको नै भएकाले फोहोर पृथकीकरणमा जोड दिएको महानगरले जनाएको छ।
कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै दिन संकलन गर्ने महानगरले स्पष्ट पारेको छ। घरमै फोहोर नछुट्याए फोहोर संकलन नगर्ने सूचनामा भनिएको छ।
दुवै प्रकारका फोहोर एकै ठाउँमा मिसाए कारबाहीस्वरूप कानून अनुसार प्रत्येक पटक ५०० रुपैयाँ जरिवाना हुने चेतावनी महानगरले दिएको छ।
महानगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ५१ ९थ० तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ९थ० अनुसार कसुर मानिने बताइएको छ।
आर्थिक बर्ष २०७९र०८० का लागि काठमाडौँ महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम नगर सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ । प्रमुख बालेन्द्र शाह ९बालेन० ले अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुभएको नीति आज बसेको सभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो । प्रमुख शाहको अध्यक्षतामा सभा सञ्चालन भएको थियो । उहाँले पहिलो बैठकमा ४१ बुँदामा आ। व। २०७८र०७९ को वार्षिक समीक्षा गर्दै १६३ बुँदामा क्षेत्रगत नीति कार्यक्रम पेश गर्नुभएको थियो ।
सडक, ढल, खानेपानीका पाइप लाइन, सडक, बत्ती टेलिफोनलगायत भौतिक पूर्वाधारको डिजिटल प्रोफाइल तयार पार्ने नीतिलाई पूर्वाधार विकास नीतिमा राखिएको छ । विग्रेका पूर्वाधारलाई थप क्षति हुन नदिन तत्काल मर्मत, सम्भारका लागि अहिले सञ्चालनमा ल्याइएको इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्सलाई आवश्यक थप उपकरण, सामग्री र जनशक्तिसहित विस्तार गरिनेछ ।
पैदल मार्गको स्तरोन्नति गर्ने, बस विसौनीहरुलाई मौलिकता दिँर्दै परम्परागत शैलीको फल्चा बनाउन इच्छुक संघ संस्थाहरुलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन नीतिलाई संशोधन गरेर त्यससँगै सार्वजनिक शौचालय र पिउने पानीको प्रबन्ध गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । सामुदायिक विद्यालय, सार्वजनिक संस्था तथा सार्वजनिक शौचालयहरुको स्तरोन्नति गरी अपाङ्ग तथा लैङ्गिकमैत्री बनाइनेछ ।